March 2014 | မိုးသကျဦးလှငျ
ဖီလာထုတ်ချင်း၊ မင်းမှ မင်း လို့..
Posted by မိုးသက် at 6:31 AM6comments Read more
ဟိုးတစ်နေ့က အကြောက်တရားနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ရေးထားပါသေးတယ်.။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက ကျွန်တော်ကြုံဖူးတဲ့ အကြောင်းသက်သက် ဖြစ်ပြီး အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရေးတဲ့ တဂ်ပို့စ်မဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါ သေးတယ်.။ အခုတော့ တကယ်ရေးပါပြီ..။ ဒီပို့စ်က တဂ်ပို့စ်ပါ.။
အစ်မနှင်းတဂ်တဲ့ “ ကြိုတင် သိမြင်နိုင်တဲ့ အကြောက်တရားနဲ့ ကြိုတင် မသိမြင်နိုင်တဲ့ အကြောက်တရား” ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးပါ.။ ခေါင်းစဉ်ကတော့ သိပ်ကို လှပါတယ်..။
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုတင်သိမြင်နိုင်တဲ့အကြောက်တရား. ဆိုတာ ..။ တစ်နေ့ဖြစ်လာမှာဆိုတာကို ကြိုသိထားတဲ့ သေခြင်းတရားကို ကြောက်လန့်ခြင်းနဲ့အလားသဏ္ဍာန် တူတဲ့အကြောက်တရားမျိုးပေါ့..။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကြိုတင် မသိမြင်နိုင်တဲ့ အကြောက်တရားဆိုတာကတော့ အမှတ်တမဲ့ ရုတ်တရတ် ဖြစ်လာတဲ့ ဟာမျိုးပေါ့..။
အဲ.. ပြောရရင် ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်က အင်မတန်ကြောက်တတ်တာ ခင်ဗျ..။ ကြောက်တတ်တာ ဆိုတာ ကိုယ့်အသားနာမှာ အင်မတန်စိုးတာ..။ ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်က သင်ထားတော့ အကောင်ပလောင် မသတ်တတ်ဘူး.။ လာကိုက်တဲ့ ခြင်က အစ လေနဲ့ မှုတ်လွှတ်လိုက်တာမျိုး.။(ခုထိပေါ့) ထို့အတူ ကိုယ့်အသား လည်း အနာမခံဘူး.။ အသားနာမယ့် အလုပ်ဆို သိပ်မလုပ်ဘူး.။
ငယ်ငယ်က အမေက မိုးကုတ်ကို နှစ်တိုင်း အလည်ပြန်ပါတယ်.. ။ ပြန်တဲ့အခါတိုင်းမှာ မိုးကုတ်က အမျိုး တွေက ကျွန်တော့်ကို ခပ်ပျော့ပျော့စာကြမ်းပိုး ကောင်လေး ဆိုပြီး အမြဲ စကြသတဲ့.။ ကျွန်တော်က အားကစား ဝါသနာမပါဘူး..။ အမေ့တူတွေ အကုန်လုံးက ဘောလုံးသမားတွေချည်းပါ.။ အဘွားအိမ်က ဧည့်ခန်းရဲ့ ထောင့်လေးထောင့်မှာ ညီအစ်ကို လေးယောက်ရဲ့ ဆုတံဆိပ်တွေကို နတ်စင်လို စင်တစ်ခုစီနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် တင်ထားကြတာမျိုးပေါ့..။ (တစ်ချိန်က မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းက နံပတ် (၁၄) မျိုးမင်းသန့် ဆိုတာ ကျွန်တော့် အစ်ကိုဝမ်းကွဲပေါ့..) ။ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကို စကြ နောက်ကြတာလည်း မပြောပါနဲ့..။ ကျွန်တော်ကလည်း လူအင်မတန် ကြောက်သကိုး.။ ဒါကလည်း ကြိုတင် မြင်နိုင်တဲ့ အကြောက်တရားပဲ ပြောရမလား..။ ငယ်ငယ်က ရန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း ဘယ်သူမှားမှား ဘယ်သူမှန်မှန် မိဘက ကိုယ့်ချည်း တွယ်တော့ ကိုယ်က လူချင်းသူတင် ကိုယ်တင် ရင်ဆိုင်ရတော့မယ့် အခါ ဆိုရင် နောက်ဆုတ်လိုက်တာမျိုးက များခဲ့တယ်.။ ဒီလိုနဲ့ ကြောက်တတ်တဲ့ စိတ်တစ်ခုက ဝင်လာရတယ်..။
နောက်ပိုင်းတော့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ပြောင်းလဲလာတယ်..။ စစ်တက္ကသိုလ်တက်တယ်.။ လူက နည်းနည်း ထုသားပေသားကျလာတယ်..။ “ ငါဒါတွေတောင် တစ်ချက်မတွန့်ပဲ ဖြတ်ကျော်လာတာ.၊ ဘာကို ကြောက်ရမှာလဲ” ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေဝင်လာတာမျိုးပေါ့.။
အစ်မ မဒမ်ကိုးတို့ ရေးထားတဲ့ မိဘ နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ခံစားချက်မျိုးက ရှိခဲ့ဖူးတယ်.။ နောက်ပိုင်းတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဖြေတတ်လာတယ်.။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က သူငယ်ချင်းတွေ ကြွေလွင့်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေ၊ မနေ့ကတင် ကိုယ်နဲ့ မုန့်စား၊ နောက်ရက် ဘဝကူး စတဲ့ အဖြစ်တွေကြုံလာရတော့ လူက ဖြေတတ်လာတယ်.။ အဖေနဲ့ အမေသာဆိုရင် ဆိုတဲ့ စိတ်က သားသမီးတိုင်းစဉ်းစားမိတဲ့ အဖြစ်မျိုးပါပဲ..။ ဒါပေမယ့် ကြောက်စိတ်တော့ မဖြစ်တော့ဘူး..။ အဖေနဲ့ အမေတို့က လူ့ဘဝမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မကောင်းတာ မလုပ်ခဲ့ဘူး.။ လိုအပ်တဲ့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာတွေလည်း ရှိတယ်..။ တကယ်လို့ မိဘတွေ ကွယ်လွန်သွားရင်တောင် နောက်ဆံတင်းစရာ မလိုတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ကိုယ့်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာလည်း မိဘတွေ သိအောင် ပြပြီးပြီ..။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းကလည်း ဆိုးသွမ်းတဲ့ သားသမီးမျိုးထဲမှာ ကိုယ်မပါခဲ့ဘူးလေ..။ တစ်အိမ်လုံးက အသိတရားနဲ့ပဲ ရပ်တည်လာတာ ဆိုတော့ အဖေအမေတို့လည်း ဒီလမ်းက မလွတ်ဘူးဆိုတာ သိပေမယ့် အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်နေတတ်တယ်.။ ပုထုဇဉ်သဘာဝ ပူပင်ကောင်းပူပင်မှာပေါ့..။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ကို ကျေပြီးသား လူတွေမို့ အရမ်းကြီးတော့ ကြောက်မနေမိဘူး..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အဲဒီလိုပဲ..။ ငါအခုအချိန် သေရင် တန်ပြီလားဆိုတဲ့ မေးခွန်း ခဏခဏ စဉ်းစားမိတယ်.။ နောက်လာမယ့် ဘုံဘဝ ဆိုတာကို ခဏထားပါဦး.။ ခုချိန်မှာ ငါသေသွားရင် “ ဆန်မကုန်မြေပေါ့” ဖြစ်သွားရုံလား၊ ကိုယ်တာဝန်ရှိသလောက် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လောကကို အကျိုးပြုပြီးပြီလား ဆိုတာ အမြဲစဉ်းစားမိတယ်.။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်အကျေနပ်ကြီး မဟုတ်ပေမယ့်. ခုချိန်သေသွားရင် ကိုယ့်အလုပ်က အလေးသာနေတယ်လို့ ယူဆလို့ ကျေနပ်နေမိမယ် ထင်တာပါပဲ..။ “ လူတိုင်း သေမှာ ကြောက်တယ်.။ မကြောက်ဘူးဆိုတာ မင်းအရူးမို့ ပြောတာ” လို့ ပြောကောင်းပြောမှာပေါ့..။ ကျွန်တော် မကြောက်ဘူး လို့ မပြောပါဘူး..။ လူပဲနော် သေမှာတော့ ကြောက်တာပေါ့.။ ဒါပေမယ့် အကြောက်ဆုံးထဲမှာ တော့ မပါခဲ့ဘူး. ..။
အဲ.. စပြီ ကျွန်တော့်အကြောက်ဆုံးတွေ စပြောတော့မယ်.။ နံပတ် (၁) ကျွန်တော် အကြောက်ဆုံးက မြွေ အပါအဝင် တွားသွားသတ္တဝါတွေပါ..။ အထူးသဖြင့် မြွေပေါ့..။ မြွေကို အပြင်မှာ မပြောနဲ့ Youtube က မြွေတွေ ကြည့်မိရင်တောင် တော်တော်နဲ့ ရင်တုန်တာ မပျောက်ဘူး.။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော် တာဝန်ကျတာက နေပြည်တော် တောင်ညိုမှာ.။ ပဲခူးရိုးမအဖျားနဲ့ ဆက်နေတဲ့ တောင်ကြောတွေပေါ့..။ မြွေပွေးမရှိပေမယ့်.။ တောကြီးမြွေဟောက်ဆိုတဲ့ အကောင်သေးသေးသွယ်သွယ်၊ ပါးပျဉ်းထောင်လိုက်ရင် တစ်ထွာ မကတဲ့ ဟာတွေ၊ (မယုံမရှိနဲ့ ကျွန်တော်အခု ရေးရင်းနဲ့ လန့်နေတယ် >.< ) သံကွင်းစွပ် ဆိုတဲ့ ကွင်းတွေ စွပ်ထားသလိုဟာတွေ ပေါမှ ပေါ..။ အဲ. တပ်မှာ သင်တန်းတွေဘာတွေ သွားဖို့ ကုတင်ခြေရင်းက သံသေတ္တာကို မ လိုက်ဗျာ.။ အောက်မှာ တစ်ကောင် အမြဲရှိတယ်.။ ရာသီဥတုက ပူတော့ သူတို့က အအေးရှာရင်းနဲ့ အခန်းထဲအထိ ရောက်နေတာမျိုး.။ တစ်ခေါက်က ရှမ်းဘောင်းဘီလေး လှမ်းထားတာ သွားရုတ်တဲ့အချိန် ဘောင်းဘီအောက်ကနေ ခေါင်းလေး ထွက်လာလို့ ကျွန်တော့်မှာ လန့်ပြီး မောဟိုက်သွားတာ ၁ နာရီလောက်ကြာတယ်.။
ပြောရဦးမယ်. ကြောက်ပါတယ်ဆိုမှ ..မြွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြုံရပုံများ.။
ကျွန်တော်တို့ လူပျို အရာရှိရိပ်သာက အခန်းတွေမှာ အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း တွဲလျက်ပါတယ်.။ ကျွန်တော့်အခန်းက ရေချိုးခန်းက ရေကျပေါက်က ဇကာတပ်မထားဘူး.။ (တစ်ခြားအခန်းတွေတော့ တပ်ထားတယ် ထင်တယ်.) အဲ.. ကျွန်တော် မနက်လင်းတိုင်း မျက်နှာသစ်ဖို့ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ ရေကျပေါက်ကနေ တစ်ကောင်က ရှော. ဆို ထွက် ထွက်သွားတယ်.။ အမြီးဖျားလေးပဲ မြင်လိုက်ရတာပါ.။ အမြဲတမ်းမဟုတ်ပေမယ့် နေ့တိုင်းနီးပါးပဲ.။ တစ်ရက်တစ်လေပဲ မတွေ့တာ.။ လူက အကြီးအကျယ် စိတ်သောက ရောက်ရတယ်.။ အိပ်ရာနိုးရင်တောင် ကုတင်အောက်ကို ခြေမချပဲ.. တံမြက်စည်းတွေဘာတွေနဲ့ အသံပေးပြီးမှ ဆင်းရဲ တဲ့သူက အဲဒီလို ကြီး ဒေးလီးမြင်နေရတော့ စိတ်သောကရောက်ရတာ မဆန်းဘူးပေါ့.။
အဲ တစ်ရက်ကျတော့ ကျွန်တော် ကြံတယ်..။ အုတ်နီခဲကြိုးတွေ။ သစ်သားစတွေ၊ တုတ်ချောင်းတွေနဲ့ အဲဒီ ရေကျပေါက်ကို ထိုးပိတ်ထားလိုက်တယ်.။ ငါရေချိုးရင် တစ်ခြားအခန်းသွားချိုးမယ်ပေါ့..။နောက်ရက်မနက် ကျတော့ ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ ကျွန်တော် အိပ်ရာထတာ နည်းနည်းနောက်ကျတယ်.။ ရေချိုးခန်းထဲဝင်လိုက် တော့ အဲ.. ဆရာသမားက ကျွန်တော့် ခြေအိပ်တွေ လှမ်းတဲ့ စင်အောက်မှာ အရေခွံချွတ်လဲသွားတယ်.။ အပုံလိုက် ကလေး.။ သဘောက “ ငါလာသွားတယ်” ပေါ့..။ လုပ်ပေါက်က.. လုပ်ပေါက်က..။
နောက်တော့ ပန်းရံဆရာခေါ်ပြီး အဲဒီအပေါက်ကို ဇကာတပ်ခိုင်းလိုက်မှပဲ အဲဒီပြဿနာ ကင်းဝေးတော့ တယ်.။
ကျန်တာတွေကိုတော့ သိပ်မကြောက်တတ်ဘူး.။ သရဲဆိုတာလည်း ဗထူးတုန်းက တစ်ခါပဲ ကြောက်မိ တယ်.။ နောက်တစ်ခေါက် အဲဒီ ရုံးခန်းထဲမှာ သူငယ်ချင်းကို အဖော်လိုက်ပေးတော့ လုံးဝ မကြောက်တော့ဘူး.။ ကျွန်တော့် စိတ်က တစ်ယောက်တည်းဆို ကြောက်တတ်တယ်.။ ကိုယ့်ကို အားကိုးမယ့်သူ၊ ကိုယ့်ထက် ကြောက်တတ်တဲ့သူ ပေါ်လာရင် ကြောက်စိတ်ဆိုတာ လုံးဝ ပျောက်သွားတယ်.။
ကျွန်တော်တို့ တပ်က အရာခံအကြပ်ကြီးရိပ်သာရှေ့က အပင်ကြီးက နာမည်ကြီးတယ်.။ သရဲခြောက်တယ် ဘာညာပေါ့လေ.။ ကျွန်တော်ဆို တစ်ခါတစ်လေ ရုံးကနေ ည(၁) နာရီ၊ (၂) နာရီမှ တစ်ယောက် တည်း ပြန်လာရတဲ့ အခါမျိုးတွေရှိတယ်.။ အဲဒီအချိန်အထိ ယူနီဖောင်းမချွတ်ရသေးဘူး.။ တပ်မှာ အငယ်ပေမယ့် ကျွန်တော်က အလုပ်ကြိုးစားတယ်.။ မနက်ခင်းကတည်းက သွားတယ်.။ ရုံးမှာ ကိုယ့်ထက် အတွေ့အကြံရှိတဲ့ စာရေးတွေဆီက ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာတွေ လုပ်ရင်းနဲ့ သင်တယ်.။ ကိုယ်က သူတို့ထက် တတ်တဲ့ ကွန်ပျူတာပိုင်းတွေ သူတို့ကို ပြန်သင်ပေးတယ်..။ ဒါပေမယ့် တပ်ရင်းမှူးက သူတို့ လုပ်ရင် စိတ်တိုင်းမကျတာ များတော့ ကျွန်တော်ပဲ လုပ်ရတာ များတယ်.။ တစ်ခါတစ်ခါ ပြန်တမ်းတွေ လုပ်ဖို့ များရင် ကျွန်တော် ရိပ်သာပြန်နောက်ကျတတ်တယ်.။ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး.။တောတောင်ထဲက မီးမရှိတဲ့ မှောင်မှောင်မဲမဲ တပ်တွင်းလမ်းမှာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း ပဲ…။ တစ်ခုရှိတာက ကျွန်တော်က ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့အချိန် ကြောက်စိတ်နည်းတယ်.။ (ဓဇဂ္ဂသုတ် ကိုသတိရပါ) .။ ကိုယ်က တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပဲ ဆိုတဲ့ အသိနဲ့တင် Will power တစ်ခုက အလိုလို ရှိနေတတ်တယ်.။ နည်းနည်းလေး ကြောက်စိတ်ဝင်လာရင် ခါးပတ်ကို တင်းလိုက်တယ်.။ ဖိနပ်ကြိုးကို တင်းလိုက်တယ်.။ ဒါဆို အဆင်ပြေသွားပြီ.။ မေတ္တာသုတ်ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အကျင့်ရှိတော့ ထစ်ကနဲ ဆိုတာနဲ့ “ ယဿာနုဘာဝတော ယက္ခာ” ကို ရွတ်မိတတ်တယ်..။ ကျန်တာတွေကိုတော့ သိပ်မကြောက်မိဘူး.။
ကဲ..ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြောက်တရားနဲ့ မကြောက်တရားတွေကိုတော့ ဤတွင်နိဋ္ဌိတံဖို့ သင့်ပါပြီ..။ တဂ်ပေးတဲ့ အစ်မ နှင်းကို ကျေးဇူးတင်သလို၊ တီတင့်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။ တစ်နေကုန်လည်း လမ်းသလားထားတော့ မျက်လုံးနှစ်လုံးက ခဲဆွဲထားသလို ဖြစ်နေပါပြီ..။ အစက မနက်ဖြန် ရွှေ့ဦးမလို့ပါ..။ ဟိုဂရုထဲမှာ အာချောင်ထားတာကြောင့် ကျိန်စာသင့်ပြီး မတော်.. ခြောက်သွားမစိုးလို့ပါ. ဟီးဟီး..။
(ကိုင်း မခက်ပေဘူးလား.။ ရေးခိုင်းတာက တစ်ခြား. ဟော့သည် ငမိုးဆိုတဲ့ အကောင် သူပြောချင်တာ တွေ ပြောချင်ရာ ပြောပြီး ဖြတ်ထားခဲ့ပြီ..။ ဘယ့်နှယ်ရှိစ. မခင်သီတာ..။)
Posted by မိုးသက် at 2:04 PM 8 comments Read more
Labels: တဂ်ပို့စ်, ဆောင်းပါး, ရောက်တတ်ရာရာ
ဖဘပေါ်က ဘလော့ဂါ အများစုကို အန်တီတင့်က ဦးဆောင်ပြီး ဘလော့ပေါ် ပြန်ရောက်အောင် ကြိုးစားနေတာတွေ့ရတော့ ဝမ်းသာပါတယ်.။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပို့စ်တင်တာ အတော်ကြဲနေပြီကိုး.။ ဟိုးအရင်တုန်းက ရေးထားသလိုပါပဲ.။ Facebook ပေါ်မှာက Response ကလည်းမြန်တယ်..။ လူလည်း များတယ် ဆိုတော့ ငါးပွက်ရာ ငါးစာချတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့..။ ခုလည်း တဂ်ပို့စ်လေး ရေးမယ် စိတ်ကူးထားပါတယ်.။ ဒီနေ့တော့ တဂ်ပို့စ်လေး မဟုတ်ပဲနဲ့ သတိရမိတဲ့အကြောင်းလေးကို အရင်ရေးပါဦးမယ်.။ အဲဒီတဂ်ပို့စ်နဲ့လည်း နည်းနည်း ဆိုင်ချင်ဆိုင်မှာပေါ့လေ.။
Facebook ပေါ်မှာ သီချင်းဆိုတဲ့ စလုံးက ဒေါက်တာ ရန်နိုင်အောင် (ကိုရန်နိုင်) တင်ထားတဲ့ သရဲအကြောင်း ပို့စ်လေးတွေတွေ့မိလို့ပါ..။ အကြောက်တရားအကြောင်း စဉ်းစားမိတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ လေးတွေရေးဦးမှပဲလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်..။ ဒီနေရာမှာ တစ်ချက်ပြောလိုတာက တစ္ဆေ၊ သရဲ ဆိုတာကို ယုံကြည်တဲ့သူ ရှိသလို မယုံကြည်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်.။ ဒါပေမယ့် (၃၁) ဘုံမှာရှိတဲ့ မမြင်ရတဲ့ သတ္တဝါ အများဆိုတာလည်း ကျမ်းဂန်တွေမှာရော၊ သာဓကတွေကလည်းရှိတော့ မကြုံဖူးသူတွေအနေနဲ့ ငြင်းရခက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပေါ့လေ..။ (ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ်တိုင် မကြုံတွေ့ခင်က မယုံကြည်သူတစ်ဦးပေါ့..။) ဒါပေမယ့်လည်း စိတ်ထားတတ်ရင် ကြောက်စိတ်ထက်၊ သနားတဲ့စိတ်၊ စာနာတဲ့ စိတ်ကလေး ဝင်လာမိမယ် ထင်တာပါပဲ..။
ကဲကဲ.. နိဒါန်းချီတာတွေလည်းများနေပါပြီ..။ ဇာတ်လမ်းကို စပြောပါရစေ..။ အချိန်က ၂၀၁၀ နှစ်လည် လောက်ပေါ့.။ ကျွန်တော်က ဗထူးမှာ ခြေလျင်တပ်စုမှူးသင်တန်းကို တစ်ပွင့်(ဒုဗိုလ်)ဘဝနဲ့ တက်နေတဲ့အချိန် ပေါ့.။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တပ်မတော် တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်း (၂) ခုရှိပါတယ်.။ တစ်ခုက ဗထူးတပ်မြို့(ရပ်စောက်) မှာ ရှိပြီးတော့.။ နောက်တစ်ခုက ဘုရင့်နောင်တပ်မြို့(သံတောင်ကြီး) မှာရှိပါတယ်.။ ကျွန်တော်တို့ အသုတ်က မာစတာပါတဲ့ လူအင်အား ၈၁၀ က ဗထူးတပ်မြို့(ရပ်စောက်) မှာတက်ခဲ့ရတာပါ..။ သံတောင်နဲ့ စာရင် ဗထူးက အနည်းငယ်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်.။ သံတောင်ကြီးက နယ်မြေဒေသအားဖြင့် အညိုရောင်နယ်မြေ ထဲမှာရှိပါတယ်.။ လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ သိပ်ပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် မရှိလှတာအမှန်ပါ..။ လည်စရာပတ် စရာလည်း လောက်လောက်လားလား မရှိလို့ ပျင်းစရာကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်..။ ဗထူးကတော့ သံတောင်နဲ့စာရင် ပျော်စရာကောင်းပါတယ်.။ တကယ်တော့ ရပ်စောက်ဆိုတာ မြို့ငယ်လေးပါ..။ တစ်မြို့လုံးမှာ အင်တာနက်ကဖီး (၂) ခုရှိပါတယ်.။ အဲဒီဆိုင် (၂) ဆိုင်က တစ်လှည့်စီ လိုင်းကျပါတယ်.။ လိုင်းကလည်း တစ်ရက်ကို နေ့တစ်ပိုင်းလောက် ကျပါတယ်..။ တနင်္ဂနွေ အောက်ပတ်စ်ရတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော်တို့ တပ်စုမှူးသင်တန်း၊ ဗိုလ်ကြီးတွေ တက်ရတဲ့ တပ်ခွဲမှူးသင်တန်း၊ တပ်ကြပ်ကြီးတွေတက်ရဲ့ အရာခံ၊ အကြပ်ကြီး သင်တန်းက အဖွဲ့တွေက အင်တာနက်ဆိုင်မှာ နေရာလုကြရပါတယ်..။ မြို့ထဲမှာလည်း စားသောက်ဆိုင်တွေ ဘာညာနဲ့ ဆိုတော့ သံတောင်ထက် စည်ကားပါတယ်.။
ထားပါတော့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကို ဆက်သွားကြစို့.. ။
သင်တန်းစဖွင့်တော့ တန်းခွဲမှူးလုပ်တဲ့ အရာရှိတွေက ကျွန်တော်တို့ထဲက ကွန်ပျူတာ ကောင်းကောင်း သုံးတတ်တဲ့သူကို ရုံးအဖွဲ့မှာ ကူဖို့ခေါ်တယ်.။ အဲ ကျွန်တော်က တပ်မှာ ထောက် ကိုင်လာတဲ့သူဆိုတော့ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာ (DTP ပါပဲ.) ကိုတော့ Staff Duty ကျကျ သုံးတတ်ပါတယ်..။ အဲဒီတော့ တကယ့် တကယ် လူရွေးကြတဲ့အခါ ကျွန်တော်ရယ်၊ အောင်အောင်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းရယ် (Facebok Name – Aung Nway Oo - သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်ရထားတဲ့သူငယ်ချင်းပေါ့ - သူ့အကြောင်းကို ဘလော့မှာ တစ်ခါ ရေးဖူးတယ်)၊ အောင်ကျော်မင်း ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းရယ် (facebook name - သဲကုန်းသား) ရယ်.. သုံးယောက်က ရုံးအဖွဲ့မှာ ကူဖို့ ဖြစ်လာတာပေါ့...။
ရုံးအဖွဲ့က တကယ်တော့ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး.။ မြေပုံတွေ အညွှန်းတပ်တာမျိုး၊ P.T ဆန်းစစ်တွေ လုပ်တဲ့အခါ Records တွေကူဖြည့်ပေးတာမျိုး၊ စာရင်းတွေ ကူဖြည့်ရတာမျိုးပေါ့.။ အဲဒီလိုမျိုးတွေ ကူညီရတာပါ.။ အဲ.. ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက် အားလပ်ချိန်တိုင်း သွားကူရတာပေါ့.။ ကျန်တဲ့အချိန်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လည်း သင်တန်းချိန်ပေါ့.။
အဲဒီရုံးမှာ တန်းခွဲမှူး အရာရှိတွေ ထိုင်တယ် .. ရံဖန်ရံခါ ညအိပ်လေ့ရှိတယ်.။ ဟိုးဖက်က စာရေးတွေရှိတဲ့ ရုံးခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်.။ အဲဒီအခန်းထဲမှာ ပုံနှိပ်စာအုပ်တွေထားတယ်.။ မြေပုံတွေ၊ မြေဖြူ၊ Duster စတဲ့ စာသင်ခန်းသုံးပစ္စည်းတွေလည်း ထားတာပေါ့..။ အဲဒီ ရုံးခန်းထဲမှာ တစ်ကုတ်ကုတ်နဲ့ အမြဲနေတဲ့ ဆရာကြီး စိန်မောင်(အမည်လွှဲ) ဆိုတာ ရှိတယ်.။ အဲဒီဆရာကြီး စိန်မောင်က အမြဲတမ်း ရုံးမှာပဲနေတယ်.။ တစ်ရက်ကျတော့ အဲဒီ ဆရာကြီး စိန်မောင်က ရွှေညောင်ကို ခဏသွားရင်းနဲ့ အဲဒီ ရွှေညောင်မှာ ဆုံးသွားတယ်.။ အဲဒီအခါကျတော့ ဗမာထုံးစံအတိုင်း ဝိဥာဉ်ကို ဗထူးကို ပြန်ခေါ်တာပေ့ါလေ.။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီသတင်းကြားတဲ့အချိန် လက်မခံဘူး.။ ဘဝဟောင်းက စုတိစိတ်ကျလို့ ကွယ်လွန်တာနဲ့ စက္ကန့်မခြား ဘဝသစ်မှာ ပဋိသန္ဓေယူရတယ်ဆိုတာကို သိထားတာကိုး.။ သူ့ဖာသာ မကျွတ်မလွတ်လို့ ဗထူး ပြန်ရောက် လာရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့လေ.။
အဲဒီညကျတော့ ကျွန်တော်တို့ တန်းခွဲ (၁)က တန်းခွဲမှူး ဗိုလ်ကြီး မင်းဇော်ဦး(အမည်လွှဲ) က အဲဒီရုံး အဆောင်မှာ ညအိပ်ရော..။ မနက်ကျတော့ ကျွန်တော်တို့တန်းစီ တဲ့အချိန်မှာ အချင်းချင်း တစ်ယောက်စကား တစ်ယောက်နားနဲ့ သတင်းတစ်ခု ကြားရတယ်.။ မနေ့ညက ဗိုလ်ကြီးမင်းဇော်ဦး ရုံးခန်းထဲမှာ ဂျာနယ်ဖတ်နေ တုန်း နောက်ကနေ လက်နဲ့ ပုတ်ခံတဲ့အခါ လှည့်ကြည့်တော့ ဘယ်သူမှ မရှိတာနဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ အိမ်ပြန်သွားတယ် ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့..။ နောက်တော့ အချင်းချင်း နောက်ရင်း ပြောင်ရင်း ဟိုလူသည်လူက ဝင်နှောက်ရင်းနဲ့ပဲ အဲဒီသတင်းက Confirm မဖြစ်ပဲ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားတော့တယ်.။
အဲဒီညနေမှာ ကျွန်တော်တို့ PT ဆန်းစစ်ပြေးကြတယ်.။ ထုံးစံအတိုင်း ၃ မိုင်၊ ၅ မိုင်၊ ၁၀ မိုင်ပေါ့.။ (မိုင် ၃၀ ကတော့ သင်တန်းပြီးခါနီးမှာ တစ်ခါပဲ ပြေးရတယ်) . ။ အဲဒီလိုပြေးတဲ့ညမှာ ရုံးက ကျွန်တော်တို့ တန်းခွဲ(၁) တန်းခွဲမှူးက ကျွန်တော်တို့ (၃) ယောက်ကိုခေါ်တယ်.။ ဒီနေ့ည Records တွေ ကူဖြည့်ပေးဖို့ပေါ့.။ ကျွန်တော်တို့ လည်း ဟုတ်ကဲ့ ပြောပြီး အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ အတိုင်းပဲ ညနေစောင်းကျတော့ ရုံးကို သွားတာပေါ့..။
ရုံးကတော့ တန်းခွဲ(၁) အောက်ဖက်ကို ဆင်းလာရင် သစ်ပင်ရိပ်တွေကြားထဲက တစ်ထပ်တိုက်ပုလေးပါ။ အဲဒီရဲ့ ရှေ့အတိုင်းဆက်သွားရင် ရှေ့ ကိုက် (၁၀၀) လောက်လမ်းညာဖက်မှာ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းဖက်က ဈေးဆိုင်တွေ ရှိပါတယ်.။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်နဲ့ အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ “ ယံလေး ” ဆိုတဲ့ ဆိုင်ရှိပါတယ်.။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထုံးစံက ညဖက် ရုံးအလုပ်မလုပ်ခင် အဲဒီမှာ လက်ဖက်သုတ်၊ ရေနွေးကြမ်း၊ ကော်ဖီ၊ စီးကရက်၊ ဘာညာသာရကာယူပြီး အင်နာဗွန်စီ တစ်ယောက်တစ်လုံးသောက်ပြီးမှ ရုံးလာတာ များပါတယ်။ ညဖက် ရုံးအလုပ်တွေပြီးတဲ့အခါ ရုံးကကွန်ပျူတာနဲ့ Video Edit လုပ်တာမျိုး၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အချင်းချင်း ရှင်းပြတာမျိုးတွေ လုပ်တာပေါ့..။ ရုံးအလုပ်တွေ သိပ်များတဲ့အခါ ၂ ယောက်က အိပ်ပြီး ၁ ယောက်က စာရင်းဖြည့်တာမျိုးတွေများပါတယ်.။ အလှည့်ကျပေါ့..။
အဲဒီနေ့ညက ကျွန်တော်က စာရင်းဖြည့်ဖို့ အလှည့်ကျတယ်.။ အောင်အောင်နဲ့ အောင်ကျော်မင်းက နောက်က ခုံပေါ်မှာ အိပ်နေကြတယ်.။ အင်နာဗွန်စီ သောက်ထားတော့ လူက လန်းနေတယ်.။ သီချင်းသံကို ခပ်တိုးတိုး ဖွင့်ထားသေးတယ်.။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီတုန်းက ဖွင့်တဲ့ သီချင်းက ဗျာ.. ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ ဒီတစ်ခါဆောင်း ဆိုတဲ့ သီချင်း ..။ “ တောင်ပေါ်ချယ်ရီပန်း များတို့ပွင့်နေပြီ..။ မြေနီလွင်ပြင်ဖက်သို့ အချစ်ပြန်လာ တော့မည်..၊ တူနှစ်ကိုယ်ချစ်သမျှ ပုံပြင်အစက . ထူးခြားဆန်းပြား.. ရှမ်းရွာငယ်လေးမှာ..” ဆိုတဲ့ သီချင်း.။
ကျွန်တော်က ရှေ့က စာရင်းဇယားကို အာရုံစိုက်ပြီး ဖြည့်နေတယ်.။ (အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော် မျက်မှန်မတပ်ရသေးဘူး.။) ဖြည့်နေရင်းနဲ့ အခန်းရှေ့ ကော်ရစ်ဒါက ခြေသံကြားရတယ်.။ ခြေသံက ရှပ်ရှပ် သံမဟုတ်ဘူး.။ ရော်ဘာဖိနပ် ခပ်ထူထူကို ဖိမနင်းပဲ ထွက်တဲ့ ခပ်အုပ်အုပ်အသံမျိုး ..။ ဘုတ်. ဘုတ် ဆိုတဲ့ အသံပေါ့.။
အဲဒီအသံက ဟိုးဖက် စာရေးရုံးခန်းဖက်က လာတာ..။ ကျွန်တော်က အဲဒီအထိ ဆုံးသွားတဲ့ ဆရာကြီး အကြောင်းတွေးလည်း မတွေးမိသေး.။ စဉ်းလည်း မစဉ်းစားမိသေး..။ ရုံးကိုလာတဲ့ ဆရာကြီး တစ်ဦးဦး ဒါမှ မဟုတ် တန်းခွဲမှူး တစ်ဦးဦးပဲ ဖြစ်မှာပါလို့ ထင်မိတယ်.။ အဲဒီအချိန် စောစောက ခြေသံ တစ်ဘုတ်ဘုတ် က ကျွန်တော် စာရိုက်နေတဲ့ ရုံးခန်းရှေ့ကို ရောက်လာတယ်.။ ရုံးခန်း ရှေ့မှာ သောက်ရေအိုးစင်တစ်ခုရှိတယ်.။ စောစောက ခြေသံရပ်သွားတယ်.။ ရေအိုးထဲကရေကို ခပ်တဲ့အသံကြားရတယ်…။ ပြီးတော့ ရေကို မသောက်ပဲ ရေအိုးပေါ်က အောက်ခံခွက်ပေါ်ကို ခပ်မြင့်မြင့်ကနေ ရေသွန်ချတဲ့အသံ (ခပ်ကျယ်ကျယ်) ဆိုတာ သတိထားမိ လိုက်တယ်.။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်လက်က အလိုလို ရပ်သွားပြီ..။ ရုံးမှာ အမြဲနေတဲ့ ဆရာကြီးစိန်မောင် မနေ့က ဆုံးသွားတယ် ဆိုတဲ့အသိက ဒိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်.။ အဲဒီအချိန်မှာ လူက တစ်ခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ကြောက်စိတ်က ဝင်လာတယ်.။ ဒီနေရာမှာ အခန်းဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောပြမယ်.။ အခန်းက ကော်ရစ်ဒါက ဝင်တဲ့ တံခါးတစ်ချပ် ရှိတယ်.။ အဲဒီတံခါးက ဝင်ဝင်ချင်း ကွန်ပျူတာတစ်လုံးက တံခါးရဲ့ ညာဖက်မှာ..။ အပေါက်ဝဖက်ကို မျက်နှာ မူထားတယ်.။ (မျက်နှာမူတယ်ဆိုတာ ကွန်ပျူတာ ရိုက်သူဖက်က ကြည့်ရင် တံခါးအပေါက်ဝက ညာဖက်မှာ မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာ မြင်ရမှာပေါ့..) .။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်က ကြောက်စိတ်ကြောင့် လှုပ်လို့မရတော့ဘူး.။ ဇောချွေးတွေပြန်ပြီး ကွန်ပျူတာ စကရင်ထဲ မျက်နှာဝင်တော့မယ့်အလားကွန်ပျူတာကို စိုက်ကြည့်နေမိတယ်.။ ခုံကို ရှေ့တိုးဖို့ ကြံတယ်.။ ခုံရွှေ့တဲ့ အသံထွက်သွားမှာကိုတောင် ကြောက်နေမိတယ်.။ အဲ မျက်လုံးက လှန်မကြည့်ပဲ.. အကြည့်အာရုံကို အပေါက်ဝဖက်ကို ခိုးကြည့်လိုက်တယ်.။( နားရှုပ်သွားပြီလား.။ အခု ဒီစာကို ဖတ်နေရင်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကနေ မျက်စိမခွာပဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဘေးဘယ်ညာ ၃၀ ဒီဂရီလောက်ကို မျက်စိက မြင်နေရတယ် ဆိုတာ ကို ကြည့်ကြည့်..။ ကျွန်တော်ပြောတာက မျက်စိက ဒဲ့ မကြည့်ပေမယ့် နည်းနည်း မြင်နေရတယ်လေ…၊ သဘောပေါက်လားတော့ မသိပါဘူး..။) အဲ့လို ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ.။ အခန်းတံခါးပေါက်ဝက ခန်းစီးက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခေါင်းတစ်ခေါင်းစာလေး ဟ လာတာကိုတွေ့ရတယ်.။ လေတိုက်လို့ ဟသလို ဟတာမဟုတ် ပဲ..။ ခေါင်းတစ်ခေါင်း ဝင်ရုံစာ လက်နဲ့ ဟ ထားပြီး တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော့်ဆီကို ကြည့်နေတာကို တွေ့ရ တယ်.။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်ထိတ်သွားတယ်..။ နောက်မှာ အိပ်နေတဲ့ အောင်အောင်နဲ့ အောင်ကျော်မင်းကို လှမ်းခေါ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်.။ လည်ချောင်းက အသံက ထွက်မလာဘူး.။ တစ်နေတယ်.။ ဟိုဖက်ကို အာရုံထားကြည့်တယ်.။ စောစောက ကြည့်နေတဲ့ဟာကြီး ရှိနေတုန်းပဲ..။ ကျွန်တော် နောက်မှာ အိပ်နေတဲ့ ကောင်တွေဖက်ကို ခေါင်းမလှည့်ရဲဘူး.။ ကျွန်တော် ထိုင်နေတဲ့ ခုံကို တစ်ယောက်ယောက်က လက်လာတင်ထား တယ်လို့ စိတ်ထဲက ထင်နေမိလို့..။ အဲဒီမှာ ကံကောင်းချင်တော့ အောင်ကျော်မင်းက အိပ်မက်ယောင်တာလား၊ ဘာလားမသိဘူး.။ အိပ်မက်ထဲမှာ ဘာတွေစားနေလဲတော့ မသိဘူး.။ အင်း .အင်း နဲ့ ညည်းပြီး ပါးစပ်က ပလပ်ပလပ် နဲ့ လေတွေဝါးတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရတယ်..။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်နည်းနည်း စိတ်ပေါ့ သွားတယ်.။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ စောစောက အပေါက်ဝက ကြည့်နေတဲ့ ဟာကြီးက ပျောက်သွားတယ်.။ ခန်းဆီး စလေး လည်း ပြန် ကျသွားတယ်.။ ကဲ.. အဲဒီအခါကျတော့ ကျွန်တော့်အသံ ထွက်ပါပြီ…။ တကယ်ထွက်ပါပြီ..။
“အောင်ကျော်မင်း. အောင်အောင်.. ငအောင်.. ငအောင်.. အောင်ကျော်မင်း.. ဟရောင် ” နဲ့ အော်လိုက်တော့ ၂ ယောက်သား နိုးလာကြတယ်.။ မေးကြတော့ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို ပြောပြ..။ သူတို့ (၂) ကောင်ကတော့ ရယ်ကြ တယ်.။
နောက်ရက်ကျတော့ နောက်ထပ်ဆန်းစစ်တွေ ထပ်လုပ်ပါသေးတယ်.။ ည (၈) နာရီလောက် ကျတော့ လက်ဖက်သုတ်တွေ ဘာတွေ သွားယူဖို့ ရုံးကိုသော့ခဏခတ်တော့ သော့က တန်းခွဲမှူးဆီ ပါသွားပြီ..။ တစ်ယောက် တော့ အစောင့်ထားခဲ့မှပဲ ဆိုတော့ အောင်ကျော်မင်းက
“ ငါနေခဲ့မယ်..။ မင်းတို့ စိတ်ချလက်ချ သွား ၊ ငါ့ကိုတော့ လာမခြောက်နဲ့ ငါနဲ့ တွေ့သွားမယ်..” တဲ့..။
ဆရာ သတ္တိကောင်းသလားတော့ မမေးပါနဲ့..။ ကျွန်တော်နဲ့ အောင်အောင် လက်ဖက်သုတ်ဝယ်ရင်း စောင့်နေတဲ့အချိန် သူ ရုံးကဖွင့်တဲ့ တရားခွေသံကြီးက ဆိုင်ကနေ ကြားရပါတယ်..။
နောက်ရက်ကျတော့ အောင်အောင့်အလှည့်ပေါ့..။ သူကတော့ ဘယ်လို ပုံစံတွေ မိလာသလဲမသိ.။ ကျွန်တော် ဆိုင်ကနေ သွားခေါ်တဲ့အချိန် ဘေးဘယ်ညာကိုတောင် မကြည့်ရဲတော့ပါ..။ ခေါင်းကို ငုံ့ချည်းသာ နေပါတော့တယ်.။ ကျွန်တော့်ကို အခန်းထဲဝင်ပြီး မီးပိတ်တာတောင် လက်ကို ဆွဲထားပါတယ်.။ အထဲက သော့ကို ငါမယူဘူး မင်းဝင်ယူပေး လို့သာ တွင်တွင် ပြောနေပါတော့တယ်.။ နောက်ရက်ကျမှ သူ့ကို နောက်ကပခုံးပုတ်ခံရတဲ့အကြောင်း ပြန်ပြောပြပါတော့တယ်.။
ကြာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ.။ ခုပြန်တွေးရင်တော့ ရယ်စရာပါပဲ...။ မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော်တို့ ကိစ္စ ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ရုံးမှာ ညအိပ်ညနေ ဘယ်သူမှ မသွားတော့ပါ..။ တန်းခွဲမှူးတွေလည်း ညမအိပ်တော့ပါ.။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း သုံးယောက်စလုံးထိုင်၊ သို့မဟုတ် နှစ်ယောက် ထိုင် တစ်ယောက်အိပ် စနစ်ဖြင့်သာ သွားပါတော့တယ်.။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ချိန်တုန်းက ကျွန်တော် ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရ အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုကို ပြန်ရေးထားတာ ပါ.။ ဒါက တဂ်ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး. ၊ ကိုရန်နိုင်ရဲ့ သရဲဇာတ်လမ်းလေးတွေတွေ့လို ပြန်ရေးဖြစ်တာပါ.။ ခါတိုင်း တစ်ခုခုဆိုရင် Facebook မှာတင်ပြီးမှ ဒီမှာတင်ပါတယ်.။ ခုတော့ ဒီမှာပဲ တင်မှာပါ.။ နောက်မှပဲ Facebook ကိုပို့ပါတော့မယ်.။ အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ..။
Posted by မိုးသက် at 3:52 PM 8 comments Read more